Unesibindi, unesibindi, unesibindi kunye nenhle
Ama-Heroines kwi-anime, ngokubanzi, akukho zintlobo ezilindele ukuba zihlangulwe. Ziyintlekisa kodwa ziza kubetha abaqhankqalazi kunye nabangabandezeli, abadayisi bokufa kunye nabasindisi bokuphila. Nantsi ingqungquthela yethu ekhunjulwayo, inesibindi, i-brashest kunye namaqhawe amanqabileyo anqabileyo kwi-anime.
Konke akunakwenzeka ukuma egumbini elifanayo kunye noBelldandy kwaye ungaziveki kakuhle ... kakuhle, ingelosi. Kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo: unkulunkulukazi, phantsi eMhlabeni ukuzalisekisa iimeko eziyinkimbinkimbi zekhontrakthi angene kuyo kunye nomntu othandekayo, uKeiichi. Kunene, uthathwa, kwaye akacingeki nokuba eze phakathi kwabo babini. Akunjalo nje ngenxa yamandla aphezulu, unako ukujikeleza, kodwa ngokuba naye uyindoda engenakugweba-kwaye enye yale migaqo ikholelwa ngokupheleleyo kubahlobo bakhe nabathandekayo. Yinyaniso yokuba unesityambo phantsi kwevelvet yakhe eyenza ukuba ibe ngaphezu kwekhadibhodi yee-eyeed-eye.
Ehlabathini leLagoon yaseMnyama - enye apho abafana abangama-twin nabazalwana abafana nabangaphantsi kwama-serial abulali bezona zinto ezimbi kakhulu oza kuzifumana-into yokuba unokufumana ukutshaya, ukuhlambalaza, ukuvuyisa , i-pat-gun-bunny yase-Chinese-gun bunny kunye nokuthambekela kokuzibulala ngumntu omhle ngenye yezinto ezimbalwa ezintle ezinokuthi zenzeke kuwe. Mhlawumbi ungazifuni ukuba ube ngumlingani, kodwa makhe sijamelane nayo - uyifunayo ncinane njengotshaba lwakho. Phakathi kwamabhinqa angama-heroes angama-aime, iRevy ayihlali kuphela (kwaye idlula) iilebula kodwa ingaba itemplate yesikhathi esizayo kubalinganiswa bexesha elide elizayo.
Eli qela leqela le-cyberpunk lenkampani lihluka kancinci ngokuxhomekeka kwinto ebonakalayo yokubukela - u-1987 wokuqala okanye u-1998. Isixhobo esiphezulu esinamandla kakhulu ukususela ekubeni u-Ellen Ripley uphakamise amandla akhe. Amaphuzu ebhonasi anikezelwa ngokungahambisani nomzimba phakathi kwamalungu eqela: umzekelo, indlela i-Moody Priss eyenziwa ngayo yi-Nene ene-spunky, okanye indlela yokubambisana ngayo ne-newbie i-Linna kunye ne-Sylia.
Abambalwa abonakalisayo banokuqhayisa malunga ne-female cast cast ngaphandle kokuhlaselwa kwi-peal peade ( Queens Blade , nabani na?). UClaymore ulawula ukuthintela lo mgibe, aze athathe enye inkohliso ngaphezulu kwayo: usinika i heroine, uClare, oqala iqhwa kunye nedekude kodwa ngee-degrees ubonisa ubunzulu beentlungu ezenza ukuba abe namaqabane angama-emoyeni athathaka. Yintoni eyinkxalabo yezinto eziqhubekayo kukuba indlela enjalo yokuzivelela inika ngayo kwaye idibanisa amandla okulwa neentshaba zabo - kodwa ngexesha elifanayo uzibeka ngakumbi engozini yokuba yizona zinto eziye zaziswa kule hlabathi. Ukuxhamla kukaClare kumntu nje, uRaki, oko kungambuyisi kuphela kumgca kodwa kumnika okuninzi ngakumbi ukuzichaza njengomlingiswa.
Uninzi lwabasetyhini kwi-sci-fi iphetha njengabantu abathintekayo besibambiso sokulwa (into ehlukile kuphela yombutho wendalo) okanye ngokungabandakanyekanga ukubeka ingubo. I-dystopian Ergo Proxy ibeka phambili umgca wesifazane kunye neziko limbonelela zombini ubuchopho kunye neengcamango, kwaye kumnika ithuba lokufumanisa intliziyo yakhe. Uthi umfazi u-Re-l iMeya, umhloli wechungechunge kwindlela yegciwane lekhompyutheni ebonakala ngathi ibangela i-android ukuba ihambe i-berserk. Ukuzinyuliswa kwe-Re-l kuqukethe okungaphezulu kunokuba nje ukusetyenziswa kwakhe ngokucophelela. (Ukuthetha ngokuthi-ukuba ingaba ulandelelwe emva kuka-Amy Lee we-Evanescence, ngubani na oqiqayo.)
Naluphi na uluhlu lwolu hlobo olungabandakanyi uMkhulu alukho enye yamagama abalinganiswa nabakhonkco kwi-anime. Ukuziphatha kwakhe kweqhwa kwakusungulwa kodwa kungagqitywanga ngokugcwele kuMamoru Oshii ukulungelelaniswa kwemifanekiso yefilimu yeSamamune Shirow yendaba ye-cyberpunk manga; kwathatha uchungechunge lwe- Stand Alone Complex TV (kwiimvumi ezimbini kunye ne-OAV elandelelanayo) ukugqithisa ngokupheleleyo umlingisi wakhe. Akukhona nje ukuba unomzimba we-cyborg kwaye unako ukugqithisa ininzi yamadoda asebenza naye; Ingqondo yakhe enkulu kunye neye-omnivorous, ingqondo yakhe embi kakhulu - kunye nesimo sakhe esichukumisayo sengqondo esifakazela uBatou, kunye neyona nto ibonakaliswe xa ezuze ngokupheleleyo.
Ekuqaleni, ubonakala engaphezulu kwendoda egqithisekayo kunye nesibhamu (kwaye i-crack shot shot to boot) - kodwa kwinqanaba lebali le-epic, njengokuba ngaphezulu kwexesha elidlulileyo le-Ginrei libonakaliswe kwaye ukhetho lwakhe lwexesha elizayo engathandabuzekiyo, ukhula abe yi-heroine ekhunjulwayo. Kananjalo usebenza njengensika yokuxhaswa kwengqondo komnye umntu oyintloko, uDaisaku, kwaye uyamnceda enze kwakhona izigqibo ezibalulekileyo ezenza isigqibo somntu wonke. (Qaphela ukuba ubonakaliswe ngokufanelekileyo kwiGiant Robo ngokwayo-i- Ginrei Special , eboniswe apha, yinto ehlekisayo yehlazo kwiindleko zomntu wakhe kunanoma yintoni enye.)
Umzingeli we-Bounty u-Iria usetyenziswa kwimisebenzi enzima, kodwa ufumana imfazwe yobomi bakhe xa umkhumbi abe wangeniswa ngenxa yokuba u-salvage uphelelwe ngumntu onobungozi obulalayo ebhodini. Iziqendu ezingabonakaliyo zesalathisi azizwanga ngathi zininzi, kodwa njengoko zandisiwe zibe yinqanaba eli-6 elincomekayo le-OVA, isithuthi senye yeen heroine ezingenakuqhafaza. U-Iria ngokwakhe ungumfazi ongenakuthobeka, onokuzimela, ongalindelanga kwikota kwiintshaba okanye ezidibeneyo: ulapha nje ukwenza umsebenzi kwaye uqokelele umvuzo wakhe, njengawo nawuphi na umntu kwindawo yakhe, indoda okanye ibhinqa. Yiyo kanye uhlobo lobuntu obunqanaba eliphezulu olwenza umchasi olungileyo ukuya kulubala kunye nokubala iZeiram (ngubani ofanelwe isalathiso kunoma uluphi uluhlu lwamaxesha onke anime ama- villa anime, afike ucinge ngawo).
Ngabalingani abaninzi besifazane kwi-anime abaselula (okanye ngaphambi kokuba bafikise ebusheni), ihlala ihlaziya ukubona i-heroin ekhulile . Ngaphandle kweNkulu (khangela uMoya kwiShell ngenhla), kukho uBalsa, umkhonto-umvuzo weMoribito . Ulukhuni kunye nehlabathi, ufumanisa ukukhusela kwakhe xa ephoqeleka ukuba athathe ngaphantsi kwephiko lakhe kwisikhulu sendawo - aze amfihle kude nababulali abafuna umoya otyalwa ngaphakathi. Kodwa into efanelekileyo yokuziphatha kwayo ikhuthazwa ubuncinci ngokunyaniseka kwanto nayiphi na into, kwaye kuyamangalisa ukubukela ukuba ubuninzi bomlingiswa wakhe obusweni phakathi kolunye ulwalamano olulungeleleneyo lokulwa.
Ininzi yonke i-Hayao Miyazaki okanye ifilimu ye-Studio Ghibli ibonisa i heroine enamandla eneengcamango ezinzulu zobulungisa. Ithemplate yazo yonke loo mantombazana yabuyiselwa kwakhona kule mzekeliso, eyona yokuqala yeMiyazaki (kunye nenye yeyona nto ibhetele). U-Nausicaä, i-heroine ye-titular, unokuba ngumncinci kwaye ongenamava - kwaye ngamanye amaxesha uyazibhokoxa ngokuzenzekelayo - kodwa uthola imivimbo yakhe ngenxa yokungabi nantoni yezinto ezenziwa ngabantu abadala abadala. Uyanamathela intamo yakhe, kungekhona kanye kuphela kodwa amaxesha amaninzi - ngokukodwa ekupheleni, xa ezama ukuyeka i-apocalypse yezinto ezingokwemvelo engenanto engaphezulu kwayo.
Intombazana yeThupha Utena: Utena
Xa abantu basebenzisa igama elithi "ubulili-bent" ukuchaza umlingiswa, abalahlekanga ukuba u-Utena akafaneli kwi-equation endaweni ethile. Inkosikazi enokuthi ibe yinto enokuthi ibe yinduna (ukuthetha), isebenzisa izakhono zokucima, ukunyaniseka kwayo, kunye nokuqina kobuhlobo bayo ukukhusela umfundi ongaziwayo ukuba abe namandla akhethekileyo axhatshazwayo. Kukhangeleka ukujonga ubunzima obuyinkimbinkimbi ephuma kumntu ongekho ngokulula nangokucacileyo, kwaye ngexesha lokufikelela kwiphepha le-odyssey yakhe yeemvakalelo iye yaba yakho. Ukuba oko akumenzeli i heroine enkulu ye-anime, akukho nto iyenzayo.
Akusiyo indlela aqala ngayo-isandi sokubhaliweyo ngamabakala amabi kunye namaphupha aphilileyo okuba ligorha. Kungenxa yokuba unike amandla, ikhula kuyo ngamadigri, kwaye ekugqibeleni iba yinkokheli enekhono elikhulu kunye nesibindi, ukubeka ithoni ngokubethelwa kwamanye ama-heroines "amantombazana" avela emva kokuvuka kwakhe. Kwaye kuxhomekeka kwindlela ogcina ngayo amanqaku, naye usebenza njengomnye wabadlali bamaqhawe abancinci kwi-anime ekhokela inkqubela yeqhawe le- sentai . Akunjalo nakwezinye iindlela.
Ababulali: Lina Inverse
Kwaye ngoku, umthamo wobugqwetha. Kukho nantoni na kuyo kwindalo yonke yabaSlayers abangayazi igama elithi "Lina Inverse" kwaye baqhube bememeza ngendlela eyahlukileyo xa beva. Akumangalisi ukuba kutheni: ukuqonda kwakhe ukuhaha, ukuhamba kweenqwelo ezitshisayo kunye nokusebenzisa kwakhe umlingo ngokungafaniyo ukudibanisa ukudala umlingane ongeke ufune ukuyichitha imizuzu emihlanu egumbini - kodwa ngokude nje kwelinye icala lesikrini, awukwazi ukulinda ukubona ukuba ubudani obuya kukhangela ngokulandelayo. Abalinganiswa abambalwa bahamba ngolo hlobo olufanelekileyo phakathi kokungapheliyo kunye nokungabonakali ngokucacileyo.
Umdla weMphefumlo: Maka Albarn
Kuthiwayo ukuba indawo engqongileyo idibanisa abantu okanye ibenzela ukuba bavuthwe ngokukhawuleza. I-Maka Albarn bubungqina bokuba le ngqangi: phakathi kokubhinqa kwakhe, ubaba wokufa kunye neengcinezelo zokusebenzisa umlingane wakhe, Umphefumlo, njengezixhobo eziphilileyo, ummangaliso engazange akhuphe. Kodwa wenza okungaphezu kokuyigcina kunye: uyayidlala umdlalo wakhe kwaye iba yintsika yamandla kokubili iqela lakhe kunye naye (ngokugqithiseleyo). Inyaniso esakwazi ukuyikrokra kuyo yonke into ithetha into ngokwayo.
I-studio e-Best Ghibli ekhuselekileyo i-Memes Memes
Uthando oluqilileyo: UShojo Manga we-Rhythm Weirdest
Ukupheka Amanqaku Okwaneleyo Okwaneleyo Ukutya
I-Best Best Romance
Hera, uThixokazi ongumGrike womtshato
Umlando weCalvary Chapel
Indlela yoPaint Composites
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeleta L
Ngaba uEinstein Uvelise UThixo?
UMark Twain "Incwadi Evela KuSanta Claus"
I-Biography yoKumkani waseRoma uNuma Pompilius
Izibonakaliso Zesilumkiso seStroke Zibone iiyure okanye iintsuku ngaphambi kokuhlaselwa
I-Storm Perfect - Nor'easters
Iikholeji ze-NASCAR eziPhezulu zeMatriki zanamhlanje
Iimfazwe ezikhethiweyo zeMfazwe Yehlabathi II
Imigaqo yeMidlalo yeMidlalo ye-Poker - Indlela yokudlala iHORSE Game Poker
Ngaba i-Easter eJamani iYithethe leNkohlakalo?
Iindidi zeMveli kunye neZityalo
Yintoni ekhuselayo kwiBhola?